Logitech dia mandefa ny tranga Trackpad tonga lafatra ho an'ny iPad (2019) sy iPad Air | Vaovao IPhone
Amin'ny maha-mpampita hevitra antsika, dia takiana amintsika ny hanana fitoniana sy fahaiza-mandanjalanja rehefa miresaka momba ny vokatra, tsy misy olona iray mandalo vokatra an-jatony maro amin'ny marika am-polony isan-taona. Saingy, heveriko fa tsy misy maharatsy ny milaza fa ny marika iray dia namorona vokatra saika tonga lafatra rehefa tena nanao izany. Fantatra amin'ny peripheral sy ny kojakojany i Logitech, saingy tsy kisendrasendra ny lazany lehibe. Tamin'ity indray mitoraka ity Logitech dia nanangana tranga vaovao miaraka amin'ny trackpad ho an'ny iPad (2019) izay hitako fa sarotra ny mahita lesoka. Zahao aminay.
Raha manana iPad ianao (2019) ary mampiahiahy ny fampidirana ny Apple's SmartKeyboard miaraka amin'ny trackpad ho an'ny iPad Pro, aza manahy, eto i Logitech hanavotra anao amin'ny olana. Ny orinasa dia nanolotra boaty boky misy endrika mahafinaritra, fanohanana ny Apple Pencil sy ny Logitech Crayon ary ireo endri-javatra mahaliana maro: Trackpad multitouch mitambatra, lakile backlit, endrika famolavolana izay mampatsiahy antsika ny klavian'ny macOS sy ny degre dimampolo degre hahafahantsika mampiasa azy roa hifaneraserana amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny safidiny ary koa hijerena andiany fotsiny.
Ity tranga ity dia tsy mila havaozina satria manana fifandraisana Smart Connector toa ny iPad 10.2 (2019) sy ny iPad Air 3, satria ireo no fitaovana roa izay tsy namoahan'ny Apple ny SmartKeyboard vaovao. Toa vokatra azo boribory tokoa aho ary iray izay hanamora ny fiainantsika, amin'ny tranga iPad "mora vidy" dia lasa safidy lehibe hafa ny mihantona miaraka amin'ny solosaina finday amin'ny toerana toa ny Oniversite na ny sekoly. Toa ahy izao ny fikapohana mafy indrindra natrehin'ny iPad tamin'ny tontolon'ny solosaina manokana, vonona ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Logitech dia mandefa ny tranga tonga lafatra miaraka amin'ny trackpad ho an'ny iPad (2019) sy iPad Air
AlberCM dia hoy izy:
Afaka mividy azy ve ianao izao? Misy rohy mankany amin'ny tranokala Logitech?
Mamaly an'i AlberCM
Amin'izao fotoana izao dia tsy amidy izy ireo, manana azy ireo ao amin'ny tranokalan'ny Apple ianao fa mila miandry andro vitsivitsy.
IOS 13.4 kinova beta volamena volamena. mijeryOSOS 6.2 sy tvOS 13.4